चितवनमा एकै घरका ४ जनालाई बगायो , एक जनाको श’व फेला बाँकीको खोजी जारी ! – Taja Khawar
चितवनमा एकै घरका ४ जनालाई बगायो , एक जनाको श’व फेला बाँकीको खोजी जारी !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ १८, २०७८ समय: १८:५४:३९
१८ असार २०७८, शुक्रबार १०:३९ चितवनमा एकै घरका ४ जनालाई बगायो , एक जनाको श’व फेला बाँकीको खोजी जारी !
तीन दिनदेखि लगातार परेको भारी वर्षाले चितवनका सातै पालिकाहरुमा ठूलो क्षति गरेको छ । राप्ती नगरपालिका वडा नं–१२ मा पहिरोले एकै घरका चार जनालाई बगाएको छ, जसमध्ये एक जनाको शव भेटिएको छ ।
रत्ननगरको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा डुबानमा परेको छ । राजमार्गमा रहेको पक्की पुल नै बाढीले भत्काएको छ । खैरहनीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योग नै डुबानमा परेको छ भने सिलिन्डर ग्यासहरु बाढीले बगाएको छ । भरपुर–११ र १२ नं वडाका सयौँ घरहरु डुबानमा परेका छन् ।
कालिका नगरपालिकामा पहिरोले पुरेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । इच्छाकामनामा ठाउँठाउँमा पहिरो खसेर कयौँ परिवारहरु विस्थापित भएका छन् । माडीमा रहेका सबै खहरे खोलाहरु बढेर स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ । नारायणी नदी नबढेका कारण तत्काल नारायणी नदी तटीय क्षेत्रहरुमा जोखिम कम छ ।
बाढीपहिरोले चितवनको राप्ती नगरपालिकामा मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको छ । अविरल वर्षाको कारण राप्ती–१२, पर्खालमा पहिरो खसेर दुई घर बगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज पौडेलका अनुसार पहिरोमा परेर चार जना बेपत्ता भएका र एक जना महिलाको शव भेटिएको छ । महिलाको शव घटनास्थलभन्दा ५० मिटर तल फेला परेको थियो ।
राप्ती नगरपालिका–१२, वाक्राङका तीन घर र कालिका नगरपालिका–१०, सिद्धिको एक घर बुधबार राति पहिरोले बगाएको छ । वाक्राङमा पहिरोले बगाएका चेपाङका तीन घरमा बसोबास गर्ने कुनै पनि सदस्य फेला नपरेको स्थानीय सन्दीप चेपाङले जानकारी दिए । विकट बस्ती भएकाले तत्काल त्यस स्थानमा पुगेर उद्धार गर्ने सम्भावना नरहेको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले बताइन् ।
त्यसैगरी, कालिका नगरपालिका–१०, सिद्धिस्थित छेरबाङमा मंगलीमाया चेपाङको घर पहिरोले बगाएको छ । घर बगाउँदा ४ वर्षीय बालक घाइते भएको चेपाङको उद्धार तथा संरक्षणमा क्रियाशील केपी किरण शर्माले बताए । अन्य सदस्यहरु भने भागेर बाँच्न सफल भएको उनले बताए ।
यस्तै, राप्ती नगरपालिकामा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । राप्ती–९ निवासी वर्ष ४५ की बिजुलीमाया श्रेष्ठको आफ्नो घरनजिक खेतमा धान रोप्न जाने क्रममा चट्याङ लागेर मृत्यु भएको चितवन प्रहरी प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिए । चट्याङ लागेपछि गम्भीर घाइते भएकी श्रेष्ठलाई उपचारका लागि भरतपुरतर्फ ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
राप्ती प्रमुख प्रभा बरालले लोथर खोला र राप्ती नदीको असर नदेखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘साना खोलाले असर गरेको हो, लोथर खोलाले हालसम्म असर गरेको छैन ।’ उनले राप्तीको लदरी खोलाले राप्ती–९ मा २ घर भत्काएको बताइन् । बाढीपहिरोले राप्ती–७, ८, ९, १०, ११, १२ नं वडाहरुमा केही न केही भौतिक क्षति गरेको छ ।
कालिका नगरपालिकामा पहिरोले एक जना बेपत्ता बनाएको छ । कालिका–११, दानेटार बस्ने वर्ष ५१ र ५२ को ज्ञानबहादुर चेपाङलाई आफ्नो घरबाट आफन्तको घर जाने क्रममा माथिबाट खसेको पहिरोले बे,पत्ता बनाएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । पहिरो गएको स्थानमा ठाडो खोला बढेका कारण प्रहरी टोली पुग्न सकेको छैन ।
Last Updated on: July 2nd, 2021 at 6:54 pm